15 carruur ah oo cudurka shubanka ugu dhintay cisbitaalka Dayniile bishii ugu danbaysay - Radio Ergo
15 carruur ah oo cudurka shubanka ugu dhintay cisbitaalka Dayniile bishii ugu danbaysay
Hawl wadeenada cisbitaalka Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cudurka shubanka ay isbitaalkaas ugu geeriyoodeen 15 carruur ah tan iyo 3dii bishii June 2018. Waxaana hadda u jiifta 57 kale. Dhammaan bukaanadani waa carruur da’doodu ay ka yartahay 5-sano, ambalaas cisbitaalku leeyahay ayaana bukaanada ka soo daad gureeya xeryaha lagu barakacay ee ay kamid yihiin Rajo, Mubaarak iyo Aaysamo oo intuba ku yaala degmada Dayniile iyo sidoo kale Tuulooyinka Misileey, iyo Qandoole oo dhanka Waqooyi ka xiga degmada Walaweyn kana tirsan G/Shabellaha Hoose halka carruurta qaar laga keenay degmada Balcad.
Agaasimaha isbitaalka Dayniile Dr. Cabaas Cabdiraxmaan Shigow ayaa Raadiyaha Ergo u sheegay in deeganada dadkaan ay ka keenayaan aysan lahayn Isbitaalo. Dadkan ayaa ah kuwo aan haysan wax dhaqaalo ah oo ay ku daaweeyaan carruurtooda ama ay isaga bixiyaan gaadiid ay ku gaaraan isbitaalada kale ee magalada sida Banaadir, isbitaalkuna hadda siiyo adeegyo caafimaad lacag la’aan ah.
“Dadka deegaanka ayaa telefon noo soo dira, markay noo sheegaan tirade dadka liita ayaan u dirraa gaari ambalas ah oo qaada 12 qof markiiba qaada” Ayuu yiri Dr. Cabaas.
Cabdikhadar Bile oo ah maamule ku xigeenka Isbitaalka Dayniile sidoo kalena si gaar ah ugu qaabilsan gaadiidka gurmadka degdega ee dadka loo diro ayaa Radio Ergo u sheegay in qof kasta oo bukaan ah oo soo Waco ay u diraan abalaas meelkastoo uujoog.
“ Xarumo ayaan ku leenahay ilaa afar xero oo ku taala dhanka Afgooye, sidoo kale iyana xarumo ayaa noogu yaala xerooyinka ku dhirirsan wadada dheer ee siinka , qofku wuxuu noola soo xiriiri karaa labbo qaab oo midi yahay inuu si toos ah u soo Waco teleefan gaar ah oo aan aniga gacanta ku haayo” Ayuu yiri Cabdikhar.
Wuxuu intaas ku daray inay xeryaha ku dhejiyeen warqado lambaradu ku qoran yihiin, sidoo kale u sameeyeen dadka lambaro ila Wadaag ah oo si lacag la’aan ah ay ku soo wacayaan dadka wax wacaya oo lacagta ay innaga naga jarmayso.
“Marka bukaanadii aan daaweyno sidoo kale dib ayaan gaariga Ambulance-ka ugu celinaa halkii aan ka soo qaadnay markii hore, dhammaan adeegyadanina waa lacag la’aan, shalay oo u dambaysayna waxaa gaadidkaasi lagu soo qaaday 6 ruux aan ka soo qaadnay siinka dheer iyo gudaha Afgooye”ayuu yiri Cabdikhadar.
Muslimo Axmed Yuusuf wiil ay dhashay ayay kula jirtaa Isbitaalka Dayniile kasi oo shubanku ku dhacay, waxaana u dheer matag . Habeenkii Labaad oo ay ku hooyanayso isbitaalka, waxay Radio Ergo u sheegtay in markii hore ay wiilkeeda ku labbo maalin oo uu shubmayay.
Wuu tabar belay,keentay in afka uu wax ka qaadan waayo oo faleebo lagu quudiyo.
” Markaan shubanka ku arkay cunuga ma malaysan inuu yahay wax daran, kaniin baan farmasi uga soo iibiyay, labbo maalin kadib oo uu ka sii daray matakna uu ku daray waxaan ula soo cararay Isbitaalka, baaritaan ayaana lagu sameeyay waxaana dhaqaatirtu ii sheegen in la jiifinayo,hadda faleebo ayaa ku rakiban, waxaana aad moodda inuu soo raynayo” AYey tiri Muslimo.
Hooyadan ayaa Isbitaalka ku timid gaadiidka gurmadka Ambulance-ka oo degmada Afgooye ka soo qaaday kaasi oo ay la xiriiriyeen Mch-ka degmada Afgooye.
Agaasimaha isbitaalka Dayniile ayaa sheegay in labadii todobaad u dambaysay uu xanuunka dadka uu soo ridanayo ee la keenayo isbitaalka ay sii kordhaysay, carruuraha ay bareenna ay ku arkeen nafaqa darro, oo miisaankoodu aad u hooseeyo, waxayna shubanka u aanaynayaa biyo wasakh ah oo ka dhashay xilli roobaadkii, iyadoo xilligaanna ay da’ayaan roobabkii xagaagu oo qoyaanka badan yahay, saxada xeryuhuna liidato.
Deegaanada ka baxsan xeryaha Dayniile ee laga keenayo dadka waxaa ka mid ah tuulooyinka Misileey iyo Qondoole oo hoostaga Degmada Walaweyn oo 7km u jirta degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Guraceel: Carruura qoysaska abaarta ku soo cayrtoobay oo waxbarasho bilaash ah helay
Dhageyso barnaamijka codka dhageystaha